व्यायाम गर्दा कपालको हेरचाह कसरी गर्ने ? अपनाउनुहोस यी टिप्सहरू || जीवनशैली
व्यायाम गर्दा कपालको हेरचाह कसरी गर्ने ? अपनाउनुहोस यी टिप्सहरू
काठमाडौं । जाडो होस् या गर्मी, कसरतपछि सबैलाई पसिना आउँछ । यस्तो अवस्थामा केटीहरूलाई पसिना आउन अलि गाह्रो हुन्छ। व्यायाम पछि छाला सफा गर्न सकिन्छ, तर कपाल हेरचाह गर्न गाह्रो हुन्छ।
कपालमा पसिना आउने कारणले कपाल कमजोर हुन थाल्छ । यदि तपाई पनि आफ्नो कपाललाई नरम र बलियो राख्न चाहनुहुन्छ भने यी टिप्स अपनाउन सक्नुहुन्छ ।
कसरत पछि कपाल धुने काम नगर्नुहोस् :-
कसरत पछि नुहाउनु महत्त्वपूर्ण छ, तर तपाईंले त्यसो गर्नबाट जोगिनु पर्छ। किनभने यो मौसममा यसले तपाईलाई बिरामी बनाउन सक्छ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं ड्राई शैम्पू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईको कपाल नरम राख्छ।
तौलिया आफुसंग बोक्नुहोस् :-
एक्सरसाइज गर्दा मानिसहरु आफ्नो शरीर र अनुहारको पसिना पुछ्छन् तर कपालमा ध्यान दिदैनन् । यस्तो अवस्थामा कपालको अवस्था बिग्रन्छ । यस्तो अवस्थामा तौलियाको सहायताले कपाल सफा राख्नुहोस्। कपालमा पसिना आउनुका कारण इन्फेक्सन र दाग लाग्ने समस्या सुरु हुन्छ, यस्तो अवस्थामा अनुहारसँगै कपाल पनि सफा गर्नुपर्छ ।
धेरै केटीहरूले जिम वा व्यायाम गर्दा कपाल खुला राख्छन्। यो जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। साथै, त्यसो नगर्नुहोस्। किनभने यस्तो अवस्थामा व्यायाम गर्दा मुखमा कपाल आउँछ । आफ्नो कपालको पोनीटेल बनाउनुहोस्।
चट्याङ किन पर्छ ? जोगिने कसरी ?
पत्ता लाग्यो प्लाष्टिक खाने किरा, प्लाष्टिक रिसाईकल गर्न सम्भव छ किरा खेती ?
आँप खाँदै हुनुहुन्छ ? यसरी चिन्नुहोस् स्वादिष्ट र विषादीयुक्त आँप !
मानिस किन निद्रामा बरबराउँछन् ? यस्तो छ कारणहरु